लिग यस्तो फुटबलको प्रतियोगिता हो, जसको आयोजना नगरेर सुखै छैन । लिगबिना कुनै पनि देशको फुटबल विकास नै हुन सक्दैन, यो सिद्धान्त र नियमजस्तै छ । यो त सबैलाई छर्लङ्ग थाहा भएको तथ्य पनि हो, तर यसको आयोजना उत्तिकै जटिल पनि छ, त्यसैले सजिलो छैन लिग गर्न । केही दिन मात्र होइन, केही सातामा पनि सकिने हुन्न, लिग । नकआउट प्रतियोगिता भएको भए, आयोजना सुरु भएको भर्खरजस्तो लाग्न सक्छ, तर तुरुन्तै सकिन्छ ।
तर लिग एकपल्ट सुरु भएपछि कहिले पो सकिने हो, व्यग्र प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यत्तिको लामो हुन्छ, यो । अहिले सहिद स्मारक लिगको ‘ए’ डिभिजन चलिरहेको छ । यसको दोस्रो चरण सकेर अहिले तेस्रो चरणका खेल भइरहेका छन् । प्रतियोगितामा सहभागी कुल १४ टिमको आधारमा एकले अर्कोसँग एक एक खेल खेल्ने आधारमा यसपल्टका लिग १३ चरण चल्नेछ । त्यसको अर्थ नियमित खेल हुँदा पनि प्रतियोगिता अझै कम्तीमा दुई महिना मज्जाले चल्नेछ, अझ त्योभन्दा पनि बढी समय लाग्न सक्नेछ ।
अनि आयोजक अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले ठ्याक्कै यस्तै महसुस गर्दाे हो, लिग गर्न कति धेरै गाह्रो पो रहेछ । एन्फाले दुई चरणका खेल सकिँदा अझ धेरै गुनासो सहनुपरेको छ, विशेषत: व्यवस्थापन पक्षलाई लिएर । टालटुले पाराले काम गर्ने एन्फाको शैलीका कारण धेरैलाई चित्त बुझ्दैन । त्यसमाथि पूरा नेपाली फुटबललाई लिएर दुई ठूला आरोप लागेको छ । पहिलो, नेपाली फुटबलको स्तर खस्केको छ, यो स्तरले नेपाली फुटबल माथि जान सक्दैन ।
दोस्रो, लिग हेर्न दर्शक नै आएनन् । खालि खालि दशरथ रंगशालामा फुटबल खेल्नु–खेलाउनुको मज्जा नै के र ? भर्खरै सकिएको १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा नेपालले पुरुष फुटबलमा स्वर्ण जित्न पनि सफल रह्यो । यसक्रममा नेपालले पस्केको फुटबल केही हदसम्म स्वादिलो पनि थियो । नेपालले खेलेका लगभग सबै खेलमा दर्शकको कमी थिएन । लगभग पूरा भरिएको रंगशालामै नेपालले आफ्ना खेल खेलेको थियो । त्यति बेला गज्ज्बको माहौल तयार भएको थियो ।
तर यस्तै माहौलको सानो अंश पनि साग सकिएर तुरुन्तै आयोजना भएको लिगमा किन देखिएन त ? फेरि पनि त्यसको उत्तर हो, लिग फुटबल सर्वथा फरक छ । लिग फुटबल मज्जाले चल्न त्यसका लागि इतिहास र परम्परादेखि संस्कृति पनि चाहिन्छ । आजको आजै लिग गरेर त्यसले तुरुन्तै सफलता र लोकप्रियता पाउने होइन । भूकम्पपछि पाँच वर्ष लिग हुन सकेन । पोहोर लिगको सुरुवात त भयो, तर त्यसमा पनि रेलिगेसन नै थिएन् ।
त्यो त लिगको मर्ममाथि नै प्रहार थियो । अझ भनौं, त्यो कलंकको लिग थियो । त्यसै कारणले यसपल्टको लिगले त्यसको कुनै स्वामित्व ग्रहण गर्न सकेन । नेपालमै पनि ०६० सालयता लिग खुबै लोकप्रिय भएको थियो । लिगका खेल हेर्ने भनेपछि मरिमेट्ने दर्शक तयार भइसकेका थिए । मनाङ–मस्र्याङ्दी, थ्री स्टार र पुलिसजस्ता टिम मैदानमा उत्रनुपथ्र्यो, आयोजकको सबैभन्दा ठूलो तनाव हुन्थ्यो, दर्शकको व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो भनेर ।
तर ती सबै स्थिति भूकम्पपछि हराए । थ्री स्टारको अहिलेका प्रशिक्षक मेघराज केसीले भनेजस्तै नेपालमा अहिले ३० जना खेलाडीको हाराहारीमा एकखाले स्तरीय खेलाडीको समूह छ । ती खेलाडीले एकै टिमबाट खेल्दा त ठिक्कको फुटबल पस्कने सक्ने हुन सक्छ । तर ती सबै खेलाडी छरिएको स्थितिमा कुनै एक खास टिम राम्रो भन्ने अवस्था नै हुन्न । जति बेलासम्म उत्तिकै राम्रो स्तरमा फुटबल खेल्ने ठूलो जमातको खेलाडी तयार हुन्न, देशको फुटबल उँभो लाग्दैन ।
त्यसैले यसपल्ट लिगमा जति पनि खेल भए, ती सबैले पस्केको फुटबल तल्लो स्तरको छ । न त कुनै टिमले आहा भन्न लायक आक्रमण बुनेको छ, न त कुनै टिमले ओहो कति राम्रो छ भन्ने रणनीति पस्कन सकेको छ । तर एउटा तथ्यमा सबै के सहमत हुनु पर्छ भने एन्फाले कडा मेहनत गर्ने हो र लगातार लिगको आयोजना गर्ने हो भने त्यो माहौल नेपाली फुटबलमा फेरि फर्कनेछ, जति बेला लिग फुटबल नै सबैभन्दा बढी लोकप्रिय हुनेछ । चुनौती नै हो, लिग फुटबल चम्काउने ।
लिग फुटबलको अर्को विशेषता हो, यो उत्तिकै खर्चालु पनि छ । अहिलेको लिगलाई मात्र भनेर प्रत्येक एउटा क्लबले ७० लाखदेखि एक करोड रुपैंयासम्म खर्च गर्नेछन् । आयोजक एन्फाले मात्र प्रतियोगिता सञ्चालनमा ६ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च गर्नेछ । यस्तोमा यो लिगका सबै बजेट जोड्ने हो भने पनि २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुनेछ । धेरैलाई लाग्न सक्छ, यति धेरै रकमको खर्च गरेर लिग चलाउनु कतै अनुत्पादक त हुन्न ?
यसको उत्तर हो— हुन्न । यसको पहिलो उत्तर त के हो भने लिगबिना कुनै पनि देशको फुटबल अगाडि नै बढ्न सक्दैन । दोस्रो उत्तर के भने लिगको व्यवस्थापन चुस्त र दुरुस्त हुनुपर्छ, यो लगानी पनि मज्जाले उठ्छ । यसका स्रोत हुन्, प्रायोजकदेखि दर्शकबाट उठ्ने रकम । अनि टेलिभिजन प्रसारणको बिक्री पनि । अझ लिगलाई राम्रो व्यवस्थापन मात्र दिन सक्नुपर्छ, यसले नाफा खान सक्छ । विश्व फुटबलका ठूला लिगले सिकाएको पाठ यही हो ।
लिगको मुख्य प्रायोजकका रूपमा एन्फाले कतार एयरवेजसँग १ लाख ५० हजार अमेरिकी डलरको अनुबन्ध गरेको छ । लिगमा सहभागी सबै क्लबको अलग–अलग आफ्नै प्रायोजक छ । यी प्रायोजक २० लाख रुपैयाँदेखि माथिका छन् । थ्रीस्टारको मुख्य प्रायोजक रुस्लान रहेको छ अनि सहायक प्रायोजक एडिडास । मुख्य प्रायोजक नरहेर पनि एडिडासले थ्रीस्टारसँग २५ लाख रुपैयाँको अनुबन्ध गरेको छ । तय छ, थ्रीस्टारले प्रायोजकबाट राम्रै साथ पाएको छ ।
फेरि एन्फाले पनि प्रत्येक क्लबलाई तयारीकै लागि भनेर २० लाख रुपैयाँ अलगै दिएको पनि छ । यस्तोमा चुनौती हो, क्लबमै पनि उत्तिकै राम्रो व्यवस्थापनको आवश्यकता । के नेपालमा क्लबका व्यावसायिक व्यवस्थापनले प्रवेश पाइसकेको छ त ? छैन । यो अर्को चुनौती भयो । लिगले दर्शकलाई तान्न सक्यो भने उत्तिकै आम्दानी हुन्छ । एउटा ‘सेल आउट’ खेलबाट नै कम्तीमा पनि ५० लाखभन्दा माथि कमाउन सकिन्छ । उपयुक्त समय हुन्छ, फ्लडलाइटमा खेल हुन्छ भने यो सर्वथा सम्भव उपाय हो ।
खेलाडी कति महँगा ?
लिग राम्रो हुन सबैभन्दा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, व्यावसायिक अब्बल दर्जाका खेलाडी । खेलाडीले खेलेरै राम्रो कमाउन सक्छ भने किन अरू थोककै बढी ध्यान दिन्छ र ? जति बेला नेपालमा लिग फुटबल लोकप्रिय थियो, त्यति बेला खेलाडीले मज्जाले कमाउन थालेका थिए । केही खास खेलाडी ६० सालतिरै महिनामा १ लाख रुपैयाँका हाराहारीमा कमाउन थालेका थिए । त्यति बेला यतिसम्म भन्न थालिएको थियो, सीधा बल प्रहार गर्न सक्नेको भाउ पनि महिनाको ३० हजार ।
तर यी सबै भूकम्पपछि कता हो कता हुने गरेर हराए । एक समय कस्तोसम्म स्थिति भयो भने फुटबल खेलाडीहरू बेरोजगार हुन थाले, पलायनको स्थिति आयो । केही राष्ट्रिय स्तरकै खेलाडी पनि अरबतिर लागे । लिग भएन भने हुने स्थिति यस्तै हो । त्यो अर्थमा यसपल्टको लिगमा पनि खेलाडीले राम्रो भाउ पाएका छैनन् । नेपाली फुटबलमा खेलाडी र क्लबबीचको अनुबन्ध पारदर्शी हुने गर्दैन । एन्फाले ध्यान दिनुपर्ने यो अर्को विषय भयो ।
तर यही कारणले खेलाडीले कति कमाउने गरेका छन्, त्यसको ठ्याक्कै विवरण छैन । राष्ट्रिय टिमबाट खेलेकै खेलाडीको अनुबन्ध पनि २५–३० हजारको हाराहारीमा छ । कम्तीमा कागजले यस्तै देखाउने गर्छ । त्यसलाई छाडेर टेबलमुनिबाट खेलाडीले कति पाउने गर्छन्, त्यो तिनै क्लब र खेलाडीलाई मात्र थाहा छ । लिग लगातार हुनुपर्छ, सबै पक्षको व्यवस्थापन पनि राम्रो हुनुपर्छ, त्यो दिन पनि फेरि टाढा छैन, जति बेला खेलाडीले फुटबल खेलेरै फेरि महिनामै राम्रै कमाउने छन् ।
नेपालको लिगमा उपाधिको होड हुँदा निर्णायक एउटा तत्त्व विदेशी खेलाडीको प्रभाव हो । सबैलाई थाहा छ, यसपल्टको लिग त्यही क्लबले जित्नेछ, जसका लागि उसका विदेशी खेलाडीले राम्रो खेल्छन् । पुलिस क्लबका प्रशिक्षक हुन्, पुराना खेलाडी अनन्त थापा । उनले प्रस्ट भनेका छन्, विदेशी खेलाडीको खेल नै लगभग निर्णायक पक्ष हो भनेर । दु:ख के भन्दा पुलिस मात्र होइन, आर्मी र एपीएफले विदेशी खेलाडी उतार्न सक्दैन, त्यसैले यी तीन विभागीय टिम लिगमा कमजोर हुने गर्छन् ।
मनाङले आर्मीविरुद्धको दोस्रो चरणको खेलमा चार विदेशी खेलाडी उतारेको थियो । बढीमा चार विदेशी खेलाडी नै उतार्ने अनुमति छ । त्यो खेल मनाङले जित्यो पनि । उपाधिको होडमा रहेको थ्री स्टारसँग विदेशी खेलाडीको कमी छैन । यस्तो अधिकांश खेलाडी अफ्रिकी मुलका हुने गर्छन्, विशेषत: क्यामरुन, नाइजेरिया, घाना, आइभरिकोस्टतिरका । यी कति राम्रा खेलाडी हुन् र किन नेपाल आएर खेल्छन्, त्यो पनि प्रश्न छ । कतै नबिकेर नेपालमा खेल्न आएका त होइनन् ?
अथवा फुटबलभन्दा पनि उनीहरूको रुचि अन्यत्र नै त छैन ? ठूलो डर लुकेको छ, यसमा । तर एउटा तथ्य यो पनि निश्चित छ, यी खेलाडी हाम्रा नेपाली खेलाडीमाथि हाबी भने हुने गर्छन् । विदेशी खेलाडीमै टिकेर प्रत्येक क्लबको प्रदर्शन आधारित हुने गरेको छ । यसपल्ट उपाधिको महत्त्वाकांक्षी देखाएको च्यासलमा जापानी खेलाडी छ, फ्रेन्ड्समा भने ब्राजिली खेलाडी । यी खेलाडीले कति कमाउने गर्छन्, त्यो पनि पारदर्शी छैन ।
खालि एउटा न्यूनतम सर्त हो, यी खेलाडीले वर्क परमिट भने लिनैपर्छ । फेरि त्यही ०६० सालतिर फर्कने हो भने नेपालमै खेल्न भनेर केही राम्रा विदेशी खेलाडी आइसकेका थिए । सायद यसपल्ट त्यत्तिको दर्जाका खेलाडीले लिग खेल्न छैनन्, तर यो पनि सर्वमान्य तथ्य हो, कुनै पनि देशको लिग राम्रो हुन विदेशी खेलाडी चाहिन्छ नै । लिग खेल्न उत्तिकै राम्रा विदेशी खेलाडी आउने छन् भने त्यसको फाइदा नेपाली फुटबललाई नै हुने हो, नेपाली खेलाडीले नै सिक्ने अवसर
पाउने हो ।
अन्त्यमा के हो भने एन्फाले स्तरीय लिगका लागि लगातार प्रयास गर्नुपर्छ र यसले ढिलो–चाँडो रंग देखाउने नै छ । लिग राम्रो हुन्छ त समग्र नेपाली फुटबल पनि राम्रो हुन्छ । एन्फा अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाले बारम्बार भन्ने गरेका छन्, जति बेलासम्म क्लब बलियो हुन्न, त्यति बेलासम्म नेपाली फुटबल पनि बलियो हुन्न । उनी आफैं हिमालयन शेर्पाका अध्यक्ष हुन् । नेपाली क्लब बलियो हुनु भन्नुको अर्थ फेरि लिग बलियो हुनु भन्न नै त हो ।